Costa Rica : Lovan’ny Teny Anglisy, Tantaran’ny Teny, Tantaran’ny Fifindra-monina · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Marine Chevrel
Voadika ny 18 Janoary 2016 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, English, عربي, 日本語, Español
San José, renivohitr'i Costa Rica tamin'ny 1885. Tamin'izany fotoana izany no nisy ny fifindra-monina ho an'ny fanorenana lalamby an'ny Atlantika sy ny fampandrosoana ny sehatry ny akondro. Miaraka aminy, fianakaviana marobe no misafidy an'i Costa Rica ho toerana hitrangan'ny tantaran'ny taranaka marobe, mariky ny lovam-panondroana sarotra sy lalina.
Ity lahatsoratra havoaka ao anatin'ny fizarana roa ity dia navoaka voalohany tao amin'ny tranokala Afroféminas, azo jerena ato.
Tantaran'ny teny, tantaran'ny fifindra-monina
Mitantara ny reniko fa fony aho mbola kely, tsy nanan-jo hiteny Espaniola izy ireo. “Ajanony izany fitenin'ny rajako izany!” izany no lazaina tamin’ izy ireo. Amin'ny hoe “fiteny rajako”, “Espaniola” no dikany.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-sivy ambin'ny folo, tonga teto toy ny mpiasa mpifindra-monina avy any Karaiba-Anglisy ny mponina mainty hoditra izay niaviako mba hitady fari-piainana tsara kokoa. Lasa anisan’ ireo tanora voaantso amin'ny fanorenana lalamby Kostarikana Altantika izy ireo ary niasa tamin'ny toeram-pambolena akondro. Nitohy ampolony taona maromaro ity fifindra-monina nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ity ary ny ankamaroan'ireo zatovolahy no nandeha voalohany. Avy eo nandray anjara tamin'izany [fifindra-monina] ny fianakaviana manontolo manantena hahazo vola ilaina amin'ny fiverenana indray an-tanindrazana.
Ao anatin'ity fifindra-monina ity, tonga ireo mpampianatra ary nanorina sekoly tao an-toerana mba hampianatra teny anglisy “marina” ho an'ny ankizy. Nanomboka tamin'izay sy nandritra ny taona maro, nilaza tena am-pireharehana fa “teratany avy ao amin'ny Fanjakana-Mitambatra” (Royaume-Uni) ireo mpifindra monina teratany Afrikana. Tsy ny hanorim-ponenana no tena fikasan'izy ireo, fa mba hanangom-bola ampy hodiana any an-tanindrazana. Saingy tsy tafody mihitsy izy ireo.
Niteny Anglisy eo ho eo ny ray aman-dreniko, na dia misy mariky ny feo sy ny lantom-peo ahafantarana ny Karaiba aza. Tsy diso ny fitsipi-pitenenana, marina ny voambolana. Sady afaka miteny anglisy tsara izy ireo no mahay miteny Anglisy Kreola, ahitana teny Espaniola. Tao anatin'izany fiteny izany, na tao anatin'ireo fiteny roa ireo, nahay angano sy hira ny ray aman-dreniko.
Nahay izy ireo noho ireo sary amin'ny endrika biby, sy noho ireo zavatra mahagaga mampianatra leson'ny fiainana, mamelona indray sy mamorona tantara. Nampahafantatra anay ireo faritanin'ny razambe izy ireo ary nirehareha ny fifandraisana tamin'ny ray aman-drenibe, dadatoa sy ny mpiara-monina. Nifandray tamin'ny olona manana fombafomba sy fivavahana, izay namelona indray ny zava-niainany fahiny izy ireo. Tamin'izany fiteny izany no nihiràn'ny reniko ny hirako voalohany sy nampianaran-draiko ahy ny vavaka nataoko voalohany. Ho azy ireo, fomba handraisana sy hampitàna ny kolontsaina sy ny fahalalana fahiny ny teny Anglisy. Ary sata ihany koa, famantarana fa fianakaviamben'ny “fanjakana” ao amin'ny firenena misy “tantsaha sy olona tsy nahita fianarana.” Teratany ao amin'ny Fanjakana Britanika izy ireo
Ny tolona ho an'ny teny, ny tolona ho an'ny mari-panondroana
Nitranga izany rehetra izany tao amin'ny firenena izay ny teny Espaniola no fiteny ofisialy. Noho izany antony izany, nanomboka tamin'ny taranaka maro mifandimby sy mandraka androany, no nahatonga ny olona mainty hoditra voatery mitolona mba hiaro ny teniny sy ny miaraka aminy, ny tantarany, ny fahalalany sy ny maha-izy azy. Nolavin ‘ny safiotra (metisy) maro an'isa sy ny governemanta tsy nety nanome ny zom-pirenena Costa Rica na ho an'ireo teraka tao amin'ny faritany aza izy (ny olona mainty hoditra).
Nahita haingana ny toerany tao anatin'ny kolontsain'izy ireo na izany aza ny teny Espaniola. Sarotra ho azy ireo ny mijanona mitoka-monina sy voahilika amin'ny rafi-pianarana Kostarikana. Ny tanjona, ho an'ireo olona ireo ihany koa dia ny handroso sy hanana fanabeazana eken'ny rafitra. Amin'izao fotoana izao, miteny Espaniola miaraka amin'ny lantom-peo mampiavaka ny teny Anglisy ny ray aman-dreniko sy ny namako. Ny taranaka ankehitriny misy ahy, na dia mampiasa ny teny Anglisy toy ny tenin-dreny aza, dia tsy ahitana mihitsy izany lantom-peo miavaka izany.
Tsy hampiasa ny teny Anglisy ho tenin-dreny ny taranaka teratany Afrikana rahatrizay. Amin'izao fotoana izao, manome fampianarana teny Anglisy ny sekoly sy ny andrim-panjakana. Ny tanjona dia ny hampahalalaka kokoa ny teny; fa tsy hitahiry intsony ny lovan’ ny olona Afrikana, tahaka ny tamin'ny telopolo taona lasa.
Tsy tsaroko tsara hoe oviana, fa nisy fotoana, nijanona tsy niteny Anglisy taminay ny ray aman-dreniko. Tsy fantatro raha fanapahan-kevitra matotra sy nifanarahan'izy ireo izany, satria lehibe tsy mba afaka niteny Anglisy ny rahalahiko, ny anabaviko sy ny tenako. Fanampin'izany, niaritra fanesoana avy amin'ny namanay teratany Afrikana izahay, sy ny fanilikilihan'ny foko iray fantatra manokana amin'ny fahaizany miteny io teny io…
Niteny Anglisy ny ankamaroan'ny namanay, na dia nanivaka tamin'ny mahazatra aza ny taranaka misy anay. Lehibe tao anatin'ny fihainoana ny ray aman-dreninay miteny Anglisy izahay. Amin'ny teny Anglisy foana ny fifandraisana amin'ny dadatoa, nenitoa, namana akaiky sy ny hafa ao amin'ny fianakaviana. Saingy miaraka aminay, tsy misy teny Anglisy na iray aza. Azo antoka fa noho ny fifindranay tany an-drenivohitra no anton'izany, izay mazava tsara fa anisan'ny vitsy an'isa izahay. Na angamba koa, te hiaro anay ny ray aman-dreninay, mba hahatonga anay tsy hiavaka loatra…
Tamin'izany fotoana izany no nanomboka ny tohin'ny tantarako
Amin'ny lahatsoratra manaraka ny tohiny